နင်မသိသေးဒဲ့ ဒေါ်လှအကြောင်း $100 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Money & Finance » နင်မသိသေးဒဲ့ ဒေါ်လှအကြောင်း $100
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 10, 2013 in Money & Finance, U.S. News | 13 comments
အမေရိကန်နိုင်ငံ ပြည်ထောင်စု ဗဟိုဘဏ်မှ အင်္ဂါနေ့တွင် ပုံစံအသစ်နှင့် ပိုတိကျကောင်းမွန်သည့် လုံခြုံရေး အစီအမံများပါသော ဒေါ်လာ၁၀၀ ငွေစက္ကူ အသစ်ကို စတင်ထုတ်ဝေသည်။ နဂိုမူလ စီစဉ်ထားချိန်ထက် ၂နှစ်ကျော်ကြာ နောက်ကျ ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
၁၀၀တန် ဒီဇိုင်းအသစ်ကို ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ထားခဲ့သော်လည်း ထုတ်လုပ်ရေး နှောင့်နှေးမှုများကြောင့် အမှန်တကယ် ထုတ်ဝေမည့်နေ့ နောက်ဆုတ်လိုက်ရသည်။ ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာလတွင်း ပုံနှိပ်နေဆဲ ငွေစက္ကူသစ် တွန့်ကြေ သွားသဖြင့် မူလစီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် ရာတန်သစ် ထွက်မလာနိုင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ထားသော ၁၀၀တန် ဒီဇိုင်းအား ၁၉၉၆ခုနှစ် မတ်လတွင် စတင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ခေတ်မှီ အဆင့်မြင့် ရာတန်စွင့်
လူတိုင်းမှတ်မိတဲ့ ဘန်ဂျမင် ဖရန်ကလင် မျက်နှာပဲ ဒီဇိုင်းအသစ်တွင်း ဆက်သုံးထားပေမဲ့ ဘဲဥအဝန်းမျဉ်းလိုင်း မပါရှိတော့ပါ။ ဒီဇိုင်းအသစ်ကို မိတ္တူဆွဲ အတုလုပ်ဖို့ ပိုခက်အောင် စီမံထားမှာဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများနဲ့ စတိုးဆိုင် ငွေကိုင်များ စစ်ဆေးရ လွယ်ကူစေမည်။
ရာတန်အသစ်၏ လုံခြုံရေးစနစ် သော့ချက်နှစ်ခုအဖြစ် ခေါင်းလောင်းများနှင့် ၁၀၀ ဂဏန်း သုံးဖက်မြင် သရီးဒီ ရေစာကြိုး၊ ပိုက်ဆံ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ကြေးနီသတ္တု မြှုပ်ထား၍ အရောင်ပြေးနေမည့် ခေါင်းလောင်းတို့အား ထည့်သွင်းထားသည်။ ရာတန်အား ရှေ့နောက် တွန့်လိမ်ကြည့်လျင် ခေါင်းလောင်းများသည် ၁၀၀ဂဏန်းအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ ငွေစက္ကူအသစ်တွင် ဖောင်းကြွပုံနှိပ်စနစ်လဲ ပါရှိသဖြင့် ပိုက်ဆံဘယ်ဖက်ရှိ ဖရန်ကလင့် ပုခုံးကို လက်ချောင်းဖြင့် ပွတ်သပ်ကြည့်လျင် အဆင့်မြင့် အင်တက်ဂျီလီယို ပုံနှိပ်နည်းစနစ်မှပေးသော ကြမ်းရှရှ အထိအတွေ့ ခံစားရပေမည်။
တရာတန် အဟောင်းများအား တဖြည်ဖြည်းခြင်း ပြည်ထောင်စု ဗဟိုဘဏ်သို့ ပြန်သိမ်းယူပြီး ဖျက်ဆီးပစ်မည် ဖြစ်သည်။ interactive NewMoney.gov တွင် ငွေစက္ကူဒီဇိုင်း အပြောင်းအလဲအား လေ့လာနိုင်သည်။
ကျေးဇူးရှင်တို့ သိမည်မထင်သေးတဲ့ ဒေါ်လာအကြောင်းအချို့ ပြောပါဆိုရင်… ဒန်တန့်တန်….
၁) တရာတန်မှာ သုံးစွဲလျက်ရှိသော ဒေါ်လာစက္ကူများတွင် အရည်အတွက်အားဖြင့် ဒုတိယလိုက်ပြီး သူ့ရှေ့မှာ တဒေါ်လာတန်သာ ရှိသည်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက ၂၀၁၂ အကုန်ထိ လည်ပတ်နေသော တရာတန်မှာ ၈၆၃.၁ ဘီလျံဒေါ်လာ (သို့) သန်းပေါင်း၈၆၃၁ရွက်မျှ ရှိပြီး တဒေါ်လာတန်မှာမူ တန်ဖိုးအားဖြင့် ၁၀.၃ ဘီလျံ (သို့) သန်းတသောင်းသုံးရာ အရည်အတွက် ဖြစ်သည်။
၂) ပုံမှန် ဒေါ်လာပိုက်ဆံ သက်တမ်းမှာ ငွေကြေးဂဏန်း သတ်မှတ်ချက် အပေါ်လိုက်၍ အပြောင်းအလဲ ရှိသည်။ ပြည်ထောင်စုဘဏ်၏ အဆိုအရ ၅.၉နှစ်သက်တမ်းရှိသော တဒေါ်လာတန်၊ ၇.၇နှစ် သက်တမ်းရှိသော ၂၀တန် တို့နှင့်နှိုင်းစာလျင် ပျမ်းမျှ ရာတန် အသက်မှာ ၁၅နှစ်ဖြစ်သည်။ ၁၀၀တန်ကို ငွေစုလက်မှတ်သဖွယ် မှတ်ယူလေ့ ရှိသဖြင့် ၎င်းအောက် တန်ဖိုးနိမ့်ပါးသော ငါးဒေါ်လာတန်ကဲ့သို့ ငွေစက္ကူများထက် ကိုင်တွယ်သုံးစွဲမှု နဲပါးသည်။ (မယုံရင် တရာတန်ကိုင်ပြီး ဈေးဝယ်ကြည့်၊ အရောင်ဈေးသည်က ပိုက်ဆံကို ဟိုခြစ်ဒီခြစ်၊ နေရောင်အောက် ထောင်ကြည့်၊ ပြူးပြဲကြည့်၊ အိုင်ဒီတောင်းကြည့် လုပ်လိမ့်မယ်၊ စကားချပ်။)
၃) ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ အဆိုအရ ဒေါ်လာ၁%၏ တရာပုံတပုံ (တနည်းအားဖြင့် တသောင်းပုံလျင် တပုံ) မပြည့်သော ဒေါ်လာအတုများ နှစ်စဉ် ဖမ်းဆီးရရှိသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် တရာတန် ဒေါ်လာမှာ ငွေစက္ကူအတု အလုပ်အများဆုံး ဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာအတု ပြုလုပ်ရန် ငွေကြေး၊ အချိန်၊ နည်းပညာ များစွာလိုအပ်မှုတို့ကြောင့် တဒေါ်လာတန် အတုလုပ်လျင် အမြတ်အစွန်း ရလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
၄) ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ဒေါ်လာတရာတန် အရည်အတွက်မှာ အခြား ဒေါ်လာတန်များထက် တနေ့တခြား မြင့်တက်လာနေသည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ် ဇွန်လ စာရင်းအရ ဒေါ်လာတန်ဖိုး ၇၇%မှာ တရာတန်အနေဖြင့် ရှိနေသည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ် မေးခွန်းတခုမှာ တရာတန်များ ဘယ်ရောက်ကုန်သနည်း၊ ပြည်တွင်းတွင် ဒေါ်လာငွေ မည်မျှရှိ၍ မည်မျှ ပြည်ပထွက်ကုန်သနည်း ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ အတွက် ခန့်မှန်းကြသည်ကတော့ ရာတန်များ၏ တဝက်မှ သုံးပုံနှစ်ပုံအထိ တိုင်းပြည်ပြင်ပတွင် ရှိသည်ဟု ဖြစ်သည်။ ဝက်စ်ကွန်ဆင်-မက်ဒီဆင်တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခ အက်ဂါဖီဂ်ျကတော့ အဆိုပါ ခန့်မှန်းချက်မှာ ပိုလွန်းပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ ပြင်ပရှိသော ဒေါ်လာတရာတန်မှာ ၂၅%လောက်သာ ဖြစ်မည်ဟု ကိုယ်ပိုင်တွက်ချက်ပြသည်။
ပြည်ပရောက် ဒေါ်လာတရာတန် ရာခိုင်နှုန်း အချိုးစားနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ဆိုစေကာမူ လွန်ခဲ့သော နှစ် အနည်းငယ်အတွင်း ဒေါ်လာတရာတန် လိုအပ်ချက် မြင့်တက်လာမှုမှာ ငြင်းမရသည့် အချက်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ နှောင်းပိုင်းနှင့် ၂၀၁၂ အဦးပိုင်း ကာလများတွင် နိုင်ငံတကာ၏ ဒေါ်လာတရာတန် လိုအပ်ချက်မှာ ပြည်ထောင်စု ဗဟိုဘဏ် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုထက် ၄၀% နီးပါး ကျော်လွန်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက် ပြိုလဲမှုကြောင့် ဘဏ်များရပ်တည်နိုင်စွမ်းကို လူအများ မယုံသင်္ကာဖြစ်ခါ ပိုက်ဆံငွေသားအဖြစ် ကြိုကြိုတင်တင် ပြောင်းလဲထား၍ဖြစ်သည်ဟု အချို့က ကောက်ချက်ချသည်။ ပိုက်ဆံတန်ဖိုးအကြီးသည် အသေးထက် သိမ်းရ ပိုလွယ်ကူသည်ကတော့ ရှင်းပါသည်။
၅) ၁၉၆၉ခုနှစ် မှစ၍ လည်ပတ်နေသော ဒေါ်လာငွေထဲတွင် တရာတန်သည် တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံး ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၁၃ခုနှစ်တွင် ပြဌာန်းသော ပြည်ထောင်စု ဗဟိုဘဏ် အက်ဥပဒေ နောက်ပိုင်း တဒေါ်လာမှ တသောင်းတန် အထိ ငွေစက္ကူတန်ဖိုး မျိုးစုံကို ၁၉၁၄တွင် စတင်ထုတ်ဝေသည်။ ၁၉၆၉ခုနှစ်တွင်မူ တရာထက်ပိုသော ဒေါ်လာ ငွေစက္ကူများကို ဈေးကွက်တောင်းဆိုမှု နည်းပါးသောကြောင့် ရပ်ဆိုင်းပစ်ခဲ့သည်။
၆) လုံခြုံရေးအစီအမံ အသစ်များကြောင့် တရာတန်ထုတ်ရန် ၁၂ပြားခွဲ ကုန်ပြီး ရာတန်အဟောင်းမှာမူ ၈.၇ပြား စရိတ်စက ရှိသည်။ ၅ဒေါ်လာ၊ ဒေါ်လာ၂၀၊ ဒေါ်လာ၅၀တန် ကုန်ကျစားရိတ်မှာ ၉.၈ပြား ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် ဗဟိုဘဏ် ဘုတ်အဖွဲ့မှ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသော ဒေါ်လာငွေစက္ကူ အရည်အတွက် လိုအပ်ချက်ကို ဘဏ္ဍာရေး ဌာနလက်အောက်ရှိ ပုံနှိပ်နှင့်ဒင်္ဂါးသွန်းဗျုရိုသို့ ပေးပို့ပြီး ကျသင့်ငွေ တောင်းခံစေသည်။ ၂၀၁၃ခုနှစ် လျာထားချက် ဘတ်ဂျက်မှာ ဒေါ်လာ ၇၉၇.၆သန်း ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၂ ဘတ်ဂျက်ထက် ၆.၈% ပိုများသည်။ ထိုသို့ မြင့်တက်လာရခြင်း အဓိက လက်သည်မှာ တရာတန်အသစ် အရွက်ရေ သန်းပေါင်း ၂၅၀၀ ပုံနှိပ်ရ၍ ဖြစ်သည်။
၇) တရာတန်ကဲ့သို့ ၅၊ ၁၀၊ ၂၀၊ ၅၀ တန်ဒေါ်လာများကို အစိုးရမှ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း လုံခြုံရေး အစီအမံ အသစ်များဖြင့် မွမ်းမံပြင်ဆင်ခဲ့သည်။ ၁ဒေါ်လာတန်ကိုသာ မပြင်မဆင်ဘဲ ထားသည်။ အကြောင်းမှာ အဖိုးနည်း ၁ဒေါ်လာတန် အသစ်ထုတ်ဝေရန် လွန်စွာ ခက်ခဲ၍ ဖြစ်သည်။ ဒေါ်လာငွေစက္ကူများအားလုံး ပုံစံ ဒီဇိုင်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန် ပြောင်းလဲရေး ကြိုပမ်းချက်တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် အင်္ဂလန် ဒီဇိုင်းကုမ္မဏီ တခုမှ တဒေါ်လာတန်ပေါ်တွင် သမတ အိုဘားမားဓာတ်ပုံ ထားရှိရန် အဆိုပြုခဲ့ဖူးသည်။
၈) ပြည်ထောင်စု ဗဟိုဘဏ်မှ ဒေါ်လာတရာတန်များကို ကုတင်ငယ်အရွယ် သေတ္တာဖြင့် ပြည်ပသို့ ပေးပို့ပြီး သေတ္တာတလုံးတွင် သာမန်အားဖြင့် ရာတန်အရွက် ခြောက်သိန်းလေးသောင်း သို့မဟုတ် ဒေါ်လာ ၆.၄သန်း တန်ဖိုးရှိသည်။
၉) မက်ဆာချုးဆက်ပြည်နယ် ဒေတွန်မြို့ရှိ ပုံနှိပ်ကိရိယာ ကုမ္မဏီ Crane & Co., မှ ဒေါ်လာငွေစက္ကူကို ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေသည်။ အဆိုပါ ကုမ္မဏီသည် ၁၈၇၉ခုနှစ်မှစ၍ အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဌာနအတွက် ပုံနှိပ်ငွေစက္ကူ တဦးတည်းမူပိုင် ထောက်ပံ့သူ ဖြစ်လာသည်။
6: It costs 12.5 cents to produce one $100 bill because of the new security features (the older version cost 8.7 cents to make). It costs 9.8 cents to make $5, $20 and $50 notes. Each year, the Federal Reserve Board projects the likely demand for new currency and places an order with the Department of the Treasury’s Bureau of Engraving and Printing, which produces U.S. currency and charges the Board for the cost of production. The budget for new currency for 2013 is $797.6 million – about 6.8% higher than the 2012 budget. The increase comes largely from the increased cost to print 2.5 billion new $100 notes.
7: Along with the $100 bill now, the government has revamped the $5, $10, $20 and $50 bills over the last decade to add security features. The $1 is the only bill to go withoutatouch-up. largely because it’s more difficult to introduceanew bill. There wasabrief proposal byaUK design firm to put President Obama on the $1 note as part ofabroader redesign of all U.S. currencies.
မျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ ကိုရင်ကြောင်…
ဒီမှာကတော့ ကဒ်ပြားသုံးပေမည့် ၊ ရွာမှာတော့ CASH IS KING…
ရွာပြန်မယ်ဆိုရင် ရာတန်အသစ်တောင်းလို့ ဘဏ်က ဘုရှိုးရှိုးတယ်…
အစွန်းအထင်းပါရင် ခေါက်ရိုးကျိုးရင် ၅ကျပ်လောက်လျော့တာမို့ပါ…
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကတော့ ဗဟိုဘဏ်က ညွှန်ကြားစာထွက်သဗျာ…ခေါက်ရိုးကျိုး.. ရုပ်ပျက် စွန်းထင်းနေလဲ အစစ်မှန်းသိသာရင် လက်ခံပါမယ်တဲ့ …အဟိဟိ …ကျော်တော့မထင်…ငါးကျပ်တော့ကွာနေတုန်း…အဟီး
ငါးကျပ်ကွာတာတော်သေးတာ။ အခုလိုအပြင်ဆိုင်တွေမပေါခင်က တရာတန်ကိုလက်မခံလို့ အဲပိုက်ဆံငါဘယ်သွားသုံးရမှာတုန်းဆိုတော့ အမတို့ဟိုပြန်ရောက်မှသုံးတဲ့။
အမေလိကန်အစိုးရ ဒို့ဗမာအစိုးရနည်းလမ်းရပီး ငွေစက္ကူအသစ်ထုတ်တာဖစ်မယ်…
သူကလေးကို အဖော်ပြုပြီး ဒီကို ရောက်လာတဲ့နေ့တွေကို သတိရမိ။
သူကလေး ကိုယ့်ဆီက ထွက်ခွါသွားတဲ့ ရက်တွေကိုလည်း သတိရမိ။
အန်တီဆွိ ချစ်ရတဲ့သူရဲ့ ကလေးလားပေါ့ ၊ အဲဒီ ကလေး ရော ဘယ်အရွယ်ရောက်ပြီလဲ
ဦးကြောင် သူကြီးကို ပြော ဗျာ
ပွိုင့် တသိန်း ပြည့်ဘို့ နီးတဲ့သူတွေ ( ဥပမာ နှစ်သောင်းကျော်အထက်ပေါ့ )ကို
အဲဒီ ဒေါ်လှ တစ်ရာတန် အသစ်တရွက်ဆီ ကြိုပေးထားပါလို့
သူကြီးက တခြားလူ စကားသိပ်နားထောင်တာ မဟုတ်ဘူး ၊ ဦးကြောင်ဆို ဘာမှ တောင် မပြောရသေးဘူး သူကခေါင်းငြိမ့်မှာ
ဒီဆိုဒ်ထဲမှာ ရေးသမျှကွန်မန့်တွေထဲ ကိုမှိုကွန်မန့် အကြိုက်ဆုံးပဲ
ဒေါ်လှ အကြောင်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံဘာသာပြန်တင်ပြပေးတာ ကျေးကျေး..ရှဲရှဲပါဗျာ
ဗမာပျီမှာဒေါ့ ဒေါ်လှအရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရတာ တော်တော်မလွယ်ဘူးဗျို့
အမေရိက က ဘာကြောင့် ပလပ်စတစ် ပိုက်ဆံ မထုတ်တာလဲ ။
ပလပ်စတစ် ပိုက်ဆံ က အသုံးခံတယ် ၊ ပြဿနာ နည်းတယ် ။
စက္ကူ ပိုက်ဆံ က ဘယ်လောက် သစ်သစ် ၊
ဗမာပြည် မိုးတွင်းမှာ မှိုတက်လေ့ ရှိတယ် ။
အော်ဇီရဲ့ ပလပ်စတစ်ပိုက်ဆံ အကြောင်း စဉ်းစားခိုင်းပါအုံး။
ဂျာမနီမှာဟန်ဘာဂါသွားစားပြီး အီတလီမှာ အီစီကလီ သွားလုပ်။ ပဲရစ်မှာ ချဲပစ် မလို့သိမ်းထားတဲ့ မီးရဲ့ ခေါင်းကြီးတွေတော့ သွားပါပြီ။ သုံးလို့မရတော့ရင်ဒုက်ခ။